Vector, labels, badges ary sary masina amin'ny fomban'ny Retro maimaimpoana! | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | Inspiration, Cartoon vector
Tianao ve ny hatsaran-tarehy? Mikasa ny hiasa amin'ity fotokevitra ity ve ianao? Amin'ny tranokala dia ho mora ho anao ny hiditra amin'ny karazana loharano rehetra. Noho izany, nanoro hevitra anao fa alohan'ny hanombohanao miasa amin'ny volavola anao ary hidina hiasa dia misotro amin'ny loharano maro ianao. Mahazoa aingam-panahy, mijery asa hafa, doka, sary, na pejy web aza, misy mandeha! Ao amin'ny Creativos Online dia nametraka fanangonana maromaro azonao atao izahay, avy amin'ny sary volo taloha, katalaogy mahazatra, lohahevitra ho an'ny WordPress a paintbrushes o gradients.
Manana ny fahaizana mampiasa ny ankamaroan'ireto loharano ireto (maimaim-poana na karama) ianao amin'ny alàlan'ny fisintomana ireo rakitra azo ovaina hiara-miasa amin'izy ireo. Mazava ho azy, tokony ho azonao antoka ny tsy manitsakitsaka teny misy ny zon'ny mpamorona, noho izany dia tokony ho fantatrao tsara momba ireo loharano ampiasainao sy ireo fepetra voalaza.
Androany dia hizara singa 110 miisa amin'ny style Retro isika. Avy amin'ny bokotra, badge ary vector hatramin'ny sary sy sary masina. Maimaimpoana ny loharano rehetra anananao ato amin'ity lisitra ity, koa… Ankafizo izy ireo!
Avy amin'ireo loharanom-pahalalana nampiasana dia mila milaza aho fa banky sary Retro tena feno sy manokana no antsoina Retrovooro. Eto amin'ity pejy ity ianao dia afaka mahita ny karazan-tsary an-tsary na amin'ny motera fikarohana na amin'ny fizahana ireo sokajy misy azy. Na dia maimaim-poana aza dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fepetra sasany ianao hampiasana ny fitaovany. Ity tranonkala ity dia mamela ireo bilaogera sy mpanoratra tsy miankina hampiasa maimaimpoana ny sarin'izy ireo raha mbola misy loharanom-pahalalana ary ampiana rohy amin'ilay pejy ihany. Na izany aza, raha ny magazine sy ny haino aman-jery hafa dia tokony hifandray amin'ireo mpitantana ny pejy izy ireo. Ny ampahany amin'ireo singa izay ho hitanao amin'ity lahatsoratra ity dia nalaina avy Retrovooro, fa nahita zavatra mahaliana ihany koa ao amin'ny Fribble, Blugrafic na Freepick (amin'ity fizarana ity dia hahita faritra premium ianao). Manana safidy isan-karazany ianao, araraoty izany.
Karatra ho an'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Vector, labels, badges ary sary masina amin'ny fomban'ny Retro maimaimpoana!